'Nama malee manni nama hin dararu' - Maa'ikalaawii - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Google Earth
"Maa'ikalaawii keessatti ammayyuu gochi gara jabeenyaa raawwatamaa jira"
Jiddugalli qorannoo yakkaa poolisii federaalaa Itoophiyaa maqaa Maa'ikalaawii jedhamuun beekamu cufamee, godambaatti jijjiirama jechuun Ministirri muummee Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dessaaleny beeksisanii turan.
Haa ta'u malee mana hidhaa kana yoo ibsan 'kan bara mootummaa dargii gochoonni gara jabinaa hedduun keessatti raawwatamaa ture' jechuun dubbatan.
Namoonni yeroo gara garaatti mana hidhaa kanatti hidhamanii qoratamaa turan garuu baruma kanayyuu gochi gara jabeenyaa Maa'ikalaawii keessaatti raawwatamaa jira jedhu.
Halkanoo Qoncooraa namoota maa'ikalaawii keessatti dararaan irra gahe keessaa tokko. A.L.I Onkoloolessa 2, 2008 kaasee hanga Eebla 14 bara 2008 ji'oota jahaaf maa'ikalaawiitti hidhame.
Boodas galmee Obbo Baqqalaa Garbaa ittiin himataman jalatti himatamee walumaagalatti waggaa 1fi ji'a sagal booda bilisaan gadhiifame. Dararaan Maa'ikalaawiitti irra gahe hamaa ta'uu dubbata.
"Qorannoon achii baay'ee hamtuudha, waanuma ati hin beekne si gaafatani, halkan sa'aa torba fi saddet keessa waamanii si reebani, reebichi isaanii akka malee hamadha, nama fannisan."
"Harkaa fi miilaa si hidhanii mukaan barcuma irratti si fannisan, akka sanaan odoo daqiiqaa shan teettee du'a malee homtuu sin hafu." jedha Halkanoon waan Maa'ikalaawiitti irra gahe yoo himu.
"Harka miila jalaan dabarsitee gurra si qabsiisanii dugda keessa si reeban, elektiriikiin si tuqanii sirraa butan, nama qaama saalaa keessa reebanii qaama saalaa isaa dhabellee nan beeka," jedha Halkanoon.
Poolisootni achi keessaati nama qoratan hundi maqaa waloo 'Kabbee' jedhamuu akka qabaniifi eenyummaa isaanii adda baasanii beekuun hin danda'amus jedha.
'Reebichi isaanii akka malee hamadha, nama fannisan'
Jiddugalli qorannoo kun kutaalee gara garaa akka qabuufi keessattu bakki Saayibeeriyaa jedhamee beekamu halkaanii fi guyyaan kan walii hin beekamne, bakka dukkanaa fi qorra hamaa qabu akka ta'e himu hidhamtoonni.
Maa'ikalaawiitti baatii afuriif seeraan ala akka hidhaman kan dubbatan Obbo Geetaachew Shifarraa bakkicha yoo ibsan, "mana hidhaa samii ijaan arguun nama hawwisiisudha," jedhu.
"Hidhamaan sa'aatii 24'f itti cufamee oola, ifa aduu arguun daqiiqaa 5 yookin 10 qofaaf hayyamama, mana fincaanii dhaquunis obboroo sa'aa 11 fi galgala sa'a 11 qofaratti hayyamama, kanarratti reebichi fi dararaan biroo hedduutu jira," jedhu.
Maa'ikalaawiitti dararaan kan irra gahaa jiru, miseensaa paartii siyaasaa kan hin taane qonnaan bultoota, daldaltootafi namootni biroos jiru kan jedhan Obbo Geetaachew, hidhamtoonni siyaasaa qofti kan hiikaman yoo taate hegereen jara kanaa akka isaan yaachisu dubbatu.
Biyyattii keessa manni hidhaa daraaraan itti raawwatamu Maa'ikalaawii qofa miti kan jedhan hidhamtoonni kunneen, kanneen kutaalee biyyattii bakka gara garaa jiran hundi cufamuu qabus jedhu.
"Namoonni qubni isaanii buqqa'e, kan kolaafaman hedduun kan dararaa isaanirra gahe mana murtiitti himataa turan jiru, jarri kun mana hidhaa sadarkaa isaa eeggatetti dabarfamu osoo hin taane hiikamuudha qabu," jedhu Obbo Geetachew.
'Maa'ikalaawii tokko cufanii kan biraa banuu'
Ministirri Muummee Hayilaamaariyaam Dassaaleny wayita jiddugalli qorannoo yakkaa kun akka cufamu himan, bakka isaa sadarkaa idil-addunyaa kan eeggate jiddu galli qorannoo yakkaa biraa ni ijaarama jedhan.
Maa'ikalaawiin akka cufamu murtaa'uun isaa murtii gaarii fi ejjennoo tokko gara fuulduraatti tarkaanfachuu mul'isa kan jedhan ogeessi seeraa Obbo Ibsaa Gammadaa, kuni qofti garuu quubsaa miti jedhu.
"Maa'ikalaawii jechuun mana, manni nama hin dararu yookan ammo miidhaa nama irraan hin gahu, kan nama dararu sirnaa fi namadha, kanaaf sirni qorannoo yakkaa bu'uura heera biyyattii fi seerota idil-addunyaa biyyattiin mallatteessite kanneen mirga dhala namaa ilaallataniin guutummaatti jijjiiramuu qaba," jedhu.
Kana malees bulchiinsa manneen sirreessaa fooyyessuunis baay'ee barbaachisaadha jedhu.
"Manneen sirreessaa amma jiran, keessattuu kan mootummaa federaalaatiin bulan caasaan isaanii guutummaan guutuutti bifa jedhamuu danda'uun qaama tokko yookan garee tokkoon kan dhuunfatamaniidha, kan biyyattii bakka bu'anidha jechuun nama rakkisa," jedhu Obbo Ibsaan.
"Kanaaf caasaa bulchiinsa manneen sirreessaa fooyyessuun akkasumas hojimaata isaaniillee fooyyessuun barbaachisaadha," jedhu.
Kana ta'uu baannaan Maa'ikalaawii tokko cufanii kan biraa banuu ta'a jechuunis dubbatu.
"Cufamuu Maa'ikalaawii osoo hin taanee jijjiiramuu sammuu namoota maa'ikalaawii keessatti hidhamtoota miidhaa turaniitu murteessaadha," kan jedhan ammoo miseensa koree hoji raawwachiiftuu Kongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Xiruneh Gamtaadha.
"Kana malees namootni 'maa'ikalaawii' keessatti dararama raawwachaa fi raawwachiisaa turan seera birattiitti dhiyaatanii waan seerri jedhu fudhachuu yookin kennuuf qophii qabuu kan jedhutu gaafii ijoodha" jedhu.